ESI EWEPỤ KỌMPUTA ANTIVIRUS ANTIVIRUS KPAMKPAM - N'IHI BEGINNERS - 2019
Esi ewepụ kọmputa antivirus antivirus kpamkpam
Enweelarị m ederede n'ozuzu gbasara esi ewepụ antivirus site na kọmputa. Usoro mbụ nke ntụziaka a dịkwa mma maka iwepụ Avast Antivirus, Otú ọ dị, ọbụna mgbe a na-ehichapụ ya, ihe ndị dị na kọmputa ahụ na ndekọ Windows dị, nke, ọmụmaatụ, anaghị ekwe ka wụnye Kaspersky Anti-Virus ma ọ bụ ndị ọzọ na-emegide nje virus. dee na etinyewo Avast na PC. Na ntuziaka a, anyị ga-ele anya ọtụtụ ụzọ isi wepụ Avast site na usoro ahụ.
Nzọụkwụ mbụ dị mkpa - wepụ usoro antivirus na iji Windows
Ihe mbụ a ga-eme iji wepu antivirus Avast bụ iji nchịkọta ihe omume Windows, ime nke a, gaa na nchịkwa nchịkwa wee họrọ "Mmemme na Atụmatụ" (Na Windows 8 na Windows 7) ma ọ bụ "Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme" (Na Windows XP).
Mgbe ahụ, na ndepụta nke mmemme, họrọ Avast wee pịa bọtịnụ "Uninstall / Change", nke ga-ebido ngwa ngwa iwepụ antivirus na kọmputa. Naanị ịgbaso ntuziaka ihuenyo iji nweta mmeri nke ọma. Jide n'aka na ịmalitegharịa kọmputa gi mgbe akpaliri ya. Dịka e kwuworo, ọ bụ ezie na nke a ga-enye gị ohere ihichapụ ihe omume ahụ n'onwe ya, ọ ka ga-ahapụ ụfọdụ ọdịdị ya na kọmputa. Anyị na ha ga-alụ ọgụ n'ihu.
Uninstall antivirus iji Avast Uninstall Ezigbo
Avast antivirus Onye Mmepụta onwe ya na-enye ibudata ya onwe ya bara uru maka wepụ antivirus - Avast Uninstall Uru (aswclear.exe). Ị nwere ike ibudata ọrụ a site na njikọ //www.avast.ru/uninstall-utility, na ị nwere ike ịgụ ozi zuru ezu banyere iwepụ Avast antivirus site na kọmputa site na iji ọrụ a na adreesị ndị a:
//support.kaspersky.ru/2236 (Akwụkwọ ntuziaka a na-akọwa otú ewepụ kpamkpam ozi niile banyere Avast iji wụnye Kaspersky Anti-Virus)
Mgbe i budatara faịlụ ahụ a kapịrị ọnụ, ị ga-amalitegharịa kọmputa na ọnọdụ nchekwa:
Otu esi abanye na nchekwa nke Windows 7
Otu esi abanye na nchekwa nke Windows 8
Mgbe nke ahụ gasị, gbasaa Uru Avility Uninstall Utility, na "Họrọ ngwaahịa iji wepụ" ubi, họrọ ụdị ngwaahịa ahụ ịchọrọ iwepụ (Avast 7, Avast 8, wdg), na mpaghara ọzọ, pịa bọtịnụ "..." ma kọwaa ụzọ na folda ebe Avast antivirus arụnyere. Pịa bọtịnụ "Wepụ". Mgbe nkeji na ọkara, a ga-ehichapụ data niile na-emegide nje virus. Malitegharịa ekwentị na ọnọdụ nkịtị. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a zuru ezu iji kpochapụ ihe ndị ọzọ nke antivirus.